commad line for window
ဥဥ ဇာနည် က တစ်ခု ခြင်း စီ ကို ရှင်း ပြ ပေး သွား ပါလိမ့်မယ်
The append command is not available in 64-bit versions of Windows 7.
While the bitsadmin command is available in Windows 7, you should know that it is being phased out. The BITS PowerShell cmdlets should be used instead.
The bootsect command is used to configure the master boot code to one compatible with Windows7(BOOTMGR).
Even though the cacls command is available in Windows 7, it's being phased out. Microsoft recommends that you use the icacls command instead.
The command command is not available in 64-bit versions of Windows 7.
The edlin command is not available in 64-bit versions of Windows 7.
The graftabl command is not available in 64-bit versions of Windows 7.
The graphics command is not available in 64-bit versions of Windows 7.
The kb16 command is not available in 64-bit versions of Windows 7.
There are so many Command Prompt commands that I can't put them all in this single list!
Click the link above to see list2of3detailing the Command Prompt commands available in Windows 7.
The loadfix command is not available in 64-bit versions of Windows 7.
The lpq command is not available by default in Windows7but can be enabled by turning on the LPD Print Service Windows feature from Programs and Features in Control Panel.
The lpqr command is not available by default in Windows7but can be enabled by turning on the LPD Print Service Windows feature from Programs and Features in Control Panel.
The nltest command was first available in Windows 7.
The rcp command is not available by default in Windows7but can be enabled by turning on the Subsystem for UNIX-based Applications Windows feature from Programs and Features in Control Panel and then installing the Utilities and SDK for UNIX-based Applications available here.
The rpcinfo command is not available by default in Windows7but can be enabled by turning on the Services for NFS Windows feature from Programs and Features in Control Panel.
The rsh command is not available by default in Windows7but can be enabled by turning on the Subsystem for UNIX-based Applications Windows feature from Programs and Features in Control Panel and then installing the Utilities and SDK for UNIX-based Applications available here.
The setver command is not available in 64-bit versions of Windows 7.
The share command is not available in 64-bit versions of Windows 7. Share is only available in 32-bit versions of Windows7to support older MS-DOS files.
The showmount command is not available by default inWindows7but can be enabled by turning on the Services for NFS Windows feature from Programs and Features in Control Panel.
The telnet command is not available by default in Windows7but can be enabled by turning on the Telnet Client Windows feature from Programs and Features in Control Panel.
The tftp command is not available by default in Windows7but can be enabled by turning on the TFTP Client Windows feature from Programs and Features in Control Panel.
The tlntadmn command is not available by default in Windows7but can be enabled by turning on the Telnet Server Windows feature from Programs and Features in Control Panel.
The umount command is used to remove Network File System (NFS) mounted network shares.
The umount command is not available by default in Windows7but can be enabled by turning on the Services for NFS Windows feature from Programs and Features in Control Panel.
The winsat command starts the Windows System Assessment Tool,aprogram that assesses various features, attributes, and capabilities ofacomputer running Windows. Wmic
Posted by Ko Cho No comments:
Notepad ထဲက Header/Footer တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းမယ်
လို့လည်းဆိုတော့ အများစုက Text တွေထုတ်ရင် Microsoft
Word ဖိုင်တွေကိုပဲ အသုံးပြုကြတာများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချို့
Printer Services သမားတွေ၊ အချို့ ကွန်ပျူတာအကြောင်းကို
လေ့လာနေတဲ့သူတွေအများစုကတော့ တော်ရုံတန်ရုံ အကြောင်း
အရာလေးတွေဆိုရင် Notepad ထဲမှာမှတ်ထားတတ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းအလားတူပါပဲ။ Print Test လုပ်တာပဲ
ဖြစ်ဖြစ် Note မှတ်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင် Notepad ကိုအဓိက
ထားပြီးသုံးပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဒီလို Notepad နဲ့သိမ်းထား
တာလေးတွေကို Print ထုတ်ပြီး စာဖတ်ရတာလေးတွေလည်း
ရှိတယ်။ဒီလိုအခါမှာတော့ Print ထုတ်လိုက်အချိန်မှာ သင်တို့
ထိပ်ဆုံးနဲ့အောက်ဆုံးမှာ Code လေးတွေနဲ့တွဲပြီး မိမိစိတ်ကြိုက်
အရင်ဆုံး Notepad ကိုဖွင့်လိုက်ပါ၊ ပြီးသွား၇င်တော့Page Setup
အထက်ပါပုံအတိုင်း နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ ထို့နောက်တော့အောက်
Header နဲ့ Footer မှာ ပါဝင်တဲ့ Code တွေနဲ့အတူ မိမိနှစ်
သက်ရာ စာသားလေးတွေထည့်ပြီးရေးပြင်နိုင်ပါတယ်။ Code
&l = Left-align the characters that follow
&c = Center the characters that follow
&r = Rght-align the characters that follow
&d = Print thee current date
&t = Print the current time
&f =Print the name of the document
&p = Print the page number
တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေစွာစမ်းသပ်နိုင်မယ်လို့
Disco Light တစ်ခုကိုသင့်ကီးဘုတ်ပေါ်က မီးလုံးလေးတွေနဲ့ဖန်တီးမယ်
ဒီတစ်ခါ သင့်ကီးဘုတ်မှာပါတဲ့ Num Lock မီး၊ ScrollLock မီးနဲ့
CapLock မီးလေးသုံးလုံးကိုအသုံးပြုပြီး Disco Light လေးတစ်ခု
ဖန်တီးတဲ့နည်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်။ Funny အဖြစ်ပါပဲ... အရင်
ကတော့ ကျွန်တော်တစ်ခါရေးဖူးတယ် ဒီဘလော့လေးထဲမှာပဲပေ့ါ
နော်။ Window XP ပေါ်မှာ Batch File လေးကိုအသုံးပြုပြီး Disco
Light တစ်ခု ဖန်တီးမယ် Night Club မီးရောင်စုံလေးတစ်ခုအသွင်
နဲ့ပေ့ါ... စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာမှာ ၀င်လေ့လာပြီး
အရင်ဆုံး Notepad ကိုဖွင့်လိုက်ပါ၊ ပြီးသွား၇င်အောက်က Code
လေးတွေကို Copy & Paste လုပ်လိုက်ပါမယ်။
အထက်ပါပုံအတိုင်းပေ့ါ.. ပြီးသွားရင်တော့ ထို ဖိုင်ကို Disco.vbs
ဆိုပြီးမှတ်လိုက်ပါမယ်။ထို့နောက်တော့ သူ့ကို Run လိုက်မယ်
ဆိုရင်တော့ ကီးဘုတ်က မီးသုံးလုံးက မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ်နဲ့
ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် ညဘက် အမှောင်ထဲမှာဆိုရင်တော့ ဟိုသီချင်း
လေးလိုပေ့ါဗျာ... “ ပိုးစုန်းကြူးလေးတွေကိုကြည့်စမ်းကွယ်.....
တမင်ပျံဝဲပြီးနေတာရယ်....” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးလို လှပနေပါ
လိမ့်မယ်။ အဲ... ပြန်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Task Manager
wscript.exe ဆိုတာကို End Process လုပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ...
Firefox ရဲ့ Browsing Speed ကို ဘယ်လိုတိုးမလည်း ?
ကျွန်တေ်ာတို့ Facebook သုံးစွဲသူတိုင်း၊ အင်တာနက်သုံးစွဲသူ
တိုင်းထိတွေ့နေကျဖြစ်တဲ့ User Choice တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Browser
ကတော့ Mozila Firefox ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ အားနည်းချက်
တွေရှိတယ်ပြောပြော ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း သုံးနေကြ
ရတာပါပဲ။ ဒီလိုသုံးနေကြရတာနှင့်အမျှလူတိုင်းကတော့ မြန်ဆန်
မှုကိုလိုချင်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကျွန်
တော်ကိုယ်တွေ့လေးတစ်ခုနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောပါ့မယ်။ တစ်ခါတစ်
လေ ကျွန်တော်တို့ အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာသုံးစွဲကြဖူးကြမှာပါ။
Connection ကလည်း နှေး၊ စက်တွေကလည်းနှေး၊ Browser
တွေကလည်းနှေးနဲ့ ဆိုတဲ့အခါကျရင် တအားကိုပဲစိတ်ပျက်မိပါ
တယ်။ ကော်နပ်ရှင်ကျနေတာကိုတော့လက်ခံနိုင်ပေမယ့်။ Browsing
လုပ်တာ နှေးတာကိုတော့ စိတ်ထဲခိုးလိုးခုလုပဲဗျ။ဒီတော့ ထုံးစံအတိုင်း
သင့် Browser ထဲက Cache တွေ Cookies တွေစားရပါမယ်။ အဲလေ
ရှင်းရပါမယ်။ အရင်ဆုံး ကျွန်တော်တို့က အောက်ပါပုံအတိုင်း
Firefox ရဲ့ ညာဘက်ခြမ်းမှာရှိသော အမျှောင်းလေးသုံးမျှောင်းကိုနှိပ်လိုက်
ပြီး Options ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်။ပြီးသွားရင်တော့အောက်ပါပုံအတိုင်းမှ
Clear your recent history ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့
အထက်ပါပုံအတိုင်းကျလာတဲ့အခါမှာ Time range to clear: ဆိုတဲ့နေရာမှာ
Everything ဆိုတာကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်။ ဒါဆိုရင်တော့အောက်ပါပုံအတိုင်း
ကျလာတဲ့အခါမှာ အကုန်လုံးကိုအမှန်ခြစ်လေးရွေးပေးပြီးတော့ Clear Now
ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သင့် Browser ထဲမှာရှိသမျှ
Browsing History, Cookies , Cache စသဖြင့် Password Remember
သင်လျှင်လျှင်မြန်မြန်သုံးရဖို့သာအဓိကမဟုတ်ပါသလား... ကဲ ဒီထက်
မြန်အောင်ထပ်လုပ်ပါမယ်။ Browser ရဲ့ Address Bar မှာ ရိုက်ရမှာက
ပြီးရင် Search ဆိုတဲ့နေရာမှာ “network.http.pipeling” ဆိုပြီး
ရိုက်လိုက်ပါမယ်။ ဒါဆိုရင် အောက်မှာ network.http.pipeining
ဆိုတာပေါ်လာရင် သူ့ကို Double Click နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်
လက်ရှိ False ဖြစ်နေရာကနေပြီးတော့ True ဖြစ်သွားပါမယ်။ ပြီး
အထက်ပါပုံအတိုင်း “network.http.proxy.pipelining” ဆိုပြီး
ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်။ တွေ့ပြီဆိုရင် သူ့ကိုလည်း Double Click
နှိပ်ပြီး True သို့ပြောင်းပါမယ်။ပြီးသွားပြီဆိုရင် အလွတ်တစ်နေ
အထက်ပါပုံအတိုင်း Right Click ထောက်လိုက်ပြီး New ထဲကနေ
Interger ကိုဝင်လိုက်ပါ ဒါဆိုရင်တော့
အထက်ပါပုံအတိုင်း New Integer Value ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ
ဘောက်ထဲကစာသားများကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပြီး OK နှိပ်လိုက်ပါမယ်။
ထို့နောက် မိမိသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ “nglayout.initialpaint.delay”
ဆိုတာရဲ့ တန်ဖိုးကို “0“ အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးပြီး OK နှိပ်လိုက်ပါမယ်။
Search လုပ်ပြီးပြန်ရှာကြည့်ပါ အထက်ပါပုံအတိုင်းဖြစ်နေရပါမယ်။
ဒါဆိုရင်သင့်ဘရောက်ဇာကို Restart ချပြီးပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။
ရပါလိမ့်မယ်။ မှတ်ချက် MPT ရဲ့နှေးကွေးမှုကိုတော့အန်တုနိုင်မယ်
မထင်ပါ။ အခုလည်း Channel7မှာ ငါးတန်းနှင့်ပြိုင်ဘယ်သူနိုင်
အစီအစဉ်လိုပဲ MPT နှင့်ပြိုင် ဘယ် Operator နိုင်အစီအစဉ်လာ
တော့မယ်ဟု အတွင်းပိုင်းမှကြားသိရပါတယ်။ ခိခိ
Notepad ထဲက Header/Footer တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းမ...
Disco Light တစ်ခုကိုသင့်ကီးဘုတ်ပေါ်က မီးလုံးလေးတွေန...